काखी गन्हाउने समस्याबाट बच्ने ७ उपाय – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Apr 11, 2019
तुलसी र निम दुबैमा ब्याक्टेरिया बिरोधी तत्वहरु हुन्छन्। यसले ब्याक्टेरिया उत्पन्न हुनबाट बचाउँछ। तुलसी र निमको पातको लेपन बनाएर काखी वा शरिरको पसिन आउने अन्य भागमा लगाउनुपर्छ। केही समय रहन दिएर धुने वा नुहाउने गर्नुपर्छ। सातामा तीन पटक यस्तो लेपन लगाउँदा उत्तम हुन्छ। नुहाउनु भन्दा अगाडि यो लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ।
पब्जीमा प्रतिबन्ध किन ?
तपाईको खुट्टा गनाउछ? यस्ता छन् बच्ने उपाय